Heshiisyada wadajirka ah: kordhinta mushaharka iyo gunno dib-u-habayn lagu abuuray
Shaqaale, darawal-qaata shirkad gaadiidka dadweynaha, ayaa shaqada looga ceyriyay anshax xumo 28-kii Janaayo, 2015. Wuxuu u qabtay maxkamadda shaqaalaha codsiyo kala duwan.
Wuxuu si gaar ah u dalbaday faa'iidada kordhinta mushaharka aasaasiga ah, iyo sidoo kale gunno, taas oo heshiis is afgarad ah oo loogu talagalay NAO 2015, oo la saxiixay Oktoobar 8, 2015 oo loogu talagalay darawallada darawallada. Gaar ahaanshaheeda: gunnadu waxay ahayd mid dib-u-socod ah.
Si faahfaahsan, heshiiska ayaa lagu yiri:
(maqaalkiisa 1aad ee cinwaankiisu yahay "Kordhinta mushaharka dhammaan shaqaalaha, darawalada-ururiyayaasha iyo adeegga farsamada)": " Kordhinta, dib u noqoshada Janaayo 1, 2015, oo ah 0,6% mushaharka aasaasiga ah "; (qodobka 8aad ee cinwaankiisu yahay "Abuuritaanka gunno Sabti ah oo loogu talagalay soo dhaweynta darawallada"): " Dib ugu noqosho Janaayo 1, 2015, gunno adeeg Sabti ah oo ah 2 euro ayaa la abuuray. Abaalmarintan waxaa la siiyaa darawalka oo qabanaya adeeg Sabti shaqeyneysa ".
Loo shaqeeyaha ayaa diiday inuu ku dabakho qodobadan qandaraaska shaqaalaha. Wuxuu ku dooday in heshiis wadareed cusub uu kaliya khuseeyo qandaraasyada shaqada ee socda xilliga ...
Miyuu heshiis wada jir ah oo bixiya dheefaha mushaharku dib u noqosho ku dabaqaa shaqaalaha la eryey ka hor intaan la saxiixin? July 10th, 2021Tranquillus
READ Fasaxa shaqaalaynta: muddada dheer ee la kordhinayo haddii ay dhacdo dib-u-tababar xirfadeed
horeUjeedo wax ku oolnimada adoo si fudud u qoraya!
socdaHab maamuuska qaranka: kala fogeynta cusub, maaskaro qeybta 1aad iyo hawo qaadasho saacad kasta